Xildhibaan sheegay in Kulankii Golaha Shacabka uu maanta u baaqday Xisbiga Himilo Qaran – Kalfadhi
Xildhibaan Idir Dhaqtar ayaa, markii uu fashilmay inuu qabsoomo Kulankii Golaha Shacabka ee maanta kadib, waxa uu suxufiyiinta u sheegay in xildhibaannada ka maqnaa maanta golaha ee, sida uu sheegay, sababay inuu Kooram la’aan u baaqdo kulankii golaha ay aadeen Xafladda Daah-furka Xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sh. Axmed.
“Waa nasiib darro 128 qof (Xildhibaan) in maanta inta ay joogto, inta kalena ay jiraan xafladda lagu daah-furaayo Xisbigaas Himilo Qaran” ayuu yiri Xildhibaan Dhakhtar. Waxa xildhibaannadaas uu sheegayo iyo kuwo kale, oo siyaabo kala duwan mararka qaar uga maqnaada kulamada golaha bilooyin fara badan, uu ku tilmaamay iney cunaan lacag aysan shaqadooda ku xalaaleysan, sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in xildhibaannada mucaaradka ah iyo kuwa muxaafadka ah ay dantooda gaar ahaaneyd uun fiirsanayaan, sida uu u sheegay wariyayaasha uu maanta kula hadlayey gudaha Xarunta Golaha Shacabka. Taas ayuu sheegay in ay meesha ka saartay dantii guud ee ay ahayd in qaranka loogu adeego.
“Baarlamaanka waa eedeysan yahay, oo saad ka war qabtaanba, laba qeybood ayuu u qeybsan yahay mar walba: waa kuwo wasiiro ah, oo xukuumadda difaacaaya iyo kuwo wasiiro doonaaya, oo mar walba iyaguna mucaarad ah” ayuu yiri Xildhibaan Dhakhtar. “Iyaga naftirkooda haddii wasiiro laga dhigo xukuumadda waa difaaci lahaayeen” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaanno kale oo fara badan, oo ka mid ah xubnaha maanta soo xaadiray kulanka golaha, ayaa sidaas oo kale ka carooday in kulankii uu ka baaqday Golaha Shacabka, kaas oo looga doodi lahaa Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga. Guddiga Dhaqaalaha, Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga ee Golaha Shacabka ayaa ka mid ah xubnaha sida aadka ah uga xumaaday baaqashada kulankii maanta.
Afgooye, Baaba Xasan iyo Cadow oo maanta ku soo biiray Golaha Shacabka